ဆန်ဆေး ရည် ( သို့မဟုတ် ) ထမင်း ရည် ကပေး တဲ့ ကျန်းမာရေးကောင်း ကျိူး ( ရ ) ခု – Shwewiki.com
ဆန် ဟာ အာရှနိုင်ငံအများစုရဲ့ အခြေခံစားစရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း လူတိုင်းသိရှိကြပါတယ်။ယနေ့ခေတ် အိမ်တော်တော်များများမှာ ဆန်ကို ငှဲ့ချက်ခြင်းထက် ပေါင်းအိုးဖြင့်ချက်တာ ပိုမိုများပြားလာပါတယ်။
ပေါင်းအိုးနဲ့ချက်ခြင်းဖြင့် ဆန်ထက်ပိုပြီးတောင် စွမ်းအင်ပေးနိုင်တဲ့ ထမင်းရည်ကို ရရှိနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့် ပေါင်းအိုးအသုံးပြုတာထက်စာရင် ရှေးယခင်နည်းအတိုင်း ငှဲ့ချက်ခြင်းဖြင့် သဘာဝအားဆေးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ ထမင်းရည်ကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ထမင်းရည်သောက်ခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးကောင်းကျိူးများစွာ ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးထမင်းရည်ကျိူနည်းကတော့ ဆန်စားပွဲတင်ဇွန်း၃ဇွန်းစာကို ရေ၂ခွက်တွင ၂၀မိနစ်ကြာအောင်ပြုတ်ပါ။
ဆား သကြားဘာမှမထည့်တာပိုကောင်းပါတယ်။ပြုတ်ရည်ဟာ နို့ရောင်သန်းလာပြီဆိုတာနဲ့ အိုးကိုချပြီး အအေးခံကာသောက်သုံးနိုင်ပါပြီ။ဒီနည်းဟာ အကောင်းဆုံးထမင်းရည်ကို ရရှိစေမယ့်နည်းဖြစ်ပါတယ်။
ထမင်းရည်ကနေ ဘယ်လိုကျန်းမာရေးကောင်းကျိူးတွေရရှိနိုင်မလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ထမင်းရည်ရဲ့ကောင်းကျိူးများအနက် တစ်ခုမှာ သင့်စိတ်ရောကိုယ်ပါ လန်းဆန်းစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သင့်ရေချိူးကန်ထဲသို့ ထမင်းရည်အနည်းငယ်ထည့်ပြီး ထိုရေထဲတွင် မိနစ်အနည်းငယ်စိမ်ပါ။ထိုကုထုံးက သင့်ကိုလန်းဆန်းစေတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ဆန်ဟာ ကစီဓာတ်အပြည့်အဝပါရှိသောအစာတစ်ခုပါ။ကစီဓာတ်ဆိုတာ သင့်ကိုစွမ်းအင်ပေးစွမ်းသော ပင်မအုတ်မြစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းရည်ကိုသောက်ခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်ပြည့်ဝစွာ ရရှိစေမှာပါ။
မနက်အိပ်ရာထချိန်မှာ ထမင်းရည်တစ်ခွက်သောက်လိုက်ခြင်းဖြင့် သင့်တစ်နေ့တာအတွက် အားဖြည့်ပြီးသား ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
နွေရာသီမှာ ချွေးထွက်များခြင်းကြောင့် ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးကြပါတယ်။ဒါကြောင့် သင်နေပူထဲမသွားခင်မှာ ထမင်းရည်တစ်ခွက်ကိုသောက်သွားသင့်ပါတယ်။ထမင်းရည်ဟာ ရေဓာတ်သာမက
သင့်တစ်နေ့တာလိုအပ်သော အာဟာရဓာတ်များကိုပါပေးစွမ်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်.
ထမင်းရည်ဟာ ၀မ်းလျှောဝမ်းပျက်ခြင်းကို သက်သာစေသော အိမ်တွင်းကုထုံးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။လူကြီးများသာမက ကလေးငယ်များ ၀မ်းပျက်တဲ့အခါမှာလဲ ထမင်းရည်ကို တိုက်ကျွေးနိုင်ပါတယ်။
ထမင်းရည်ကြောင့် ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးခြင်းကိုလဲ ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။လေ့လာချက်တစ်ခုအရ ထမင်းရည်ဟာ ကလေးသူငယ်များဝမ်းပျက်ခြင်းအတွက် အလွန်ထိရောက်တဲ့သဘာဝဆေးတစ်လက်လို့ဆိုပါတယ်။
ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်က ထမင်းရည်က အပူငြိမ်းစေတယ်လို့ လူကြီးမိဘတွေပြောတာကြားဖူးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ပါပဲ။ထမင်းရည်သောက်ခြင်းဖြင့် သင့်ကိုယ်တွင်းအပူချိန်ကို ကျဆင်းစေပါတယ်။
နွေရာသီ နေပူထဲသွားမယ့်သူများ ထမင်းရည်ကို မဖြစ်မနေသောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
ထမင်းရည်သောက်ခြင်းဟာ သင့်အစာခြေစနစ်ကို ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်စေပါလိမ့်မယ်။
ထမင်းရည်မှာပါသော အာဟာရဓာတ်များကြောင့် ၀မ်းမှန်စေပါတယ်။အမျှုင်ဓာတ်ကြွယ်ဝသော အစားအစာများနဲ့တွဲဖက်စားခြင်းဖြင့် ပိုမိုထိရောက်စေမှာပါ။
ထမင်းရည်ဟာ သင့်ဆံသားအတွက်လဲ ကောင်းကျိူးများစွာ ပေးစွမ်းနိုင်ပါသေးတယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကပင် ရှမ်ပူနဲ့ ဆံပင်ပျော့ဆေးများမှာ ဆံဆေးရည်ကိုထည့်သွင်းဖော်စပ်ကြပါတယ်။
chemical ပါသော ရှမ်ပူများအစား သဘာဝဆန်ဆေးရည်က ကျန်းမာရေးအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး အကုန်အကျနည်းပါးစေတာပေါ့။ထမင်းရည်မှာ inositol ပါဝင်ပြီး ဆံသားကိုပိုမိုအားကောင်းစေပါတယ်။
ထို့ပြင် သင့်ဦးရေပြားကို ဆန်ဆေးရည်ဖြင့် နှိပ်နယ်ပေးပါက သင့်ဆံပင်တွေကို အရင်းကနေ အဖျားထိ သန်မာစေပါတယ်။
Writer Dr Jue_( XYZ NEWS )
ဆနျဆေးရညျ ( သို့မဟုတျ ) ထမငျးရညျ ကပေးတဲ့ ကနျြးမာရေးကောငျးကြိူး ( ရ ) ခု
ဆနျဟာ အာရှနိုငျငံအမြားစုရဲ့ အခွခေံစားစရာတဈခုဖွဈကွောငျး လူတိုငျးသိရှိကွပါတယျ။ယနခေ့တျေ အိမျတျောတျောမြားမြားမှာ ဆနျကို ငှဲ့ခကျြခွငျးထကျ ပေါငျးအိုးဖွငျ့ခကျြတာ ပိုမိုမြားပွားလာပါတယျ။
ပေါငျးအိုးနဲ့ခကျြခွငျးဖွငျ့ ဆနျထကျပိုပွီးတောငျ စှမျးအငျပေးနိုငျတဲ့ ထမငျးရညျကို ရရှိနိုငျတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ဒါကွောငျ့ ပေါငျးအိုးအသုံးပွုတာထကျစာရငျ ရှေးယခငျနညျးအတိုငျး ငှဲ့ခကျြခွငျးဖွငျ့ သဘာဝအားဆေးတဈလကျဖွဈတဲ့ ထမငျးရညျကို ရရှိစမှောဖွဈပါတယျ။
ယဘေုယအြားဖွငျ့ ထမငျးရညျသောကျခွငျးဖွငျ့ ကနျြးမာရေးကောငျးကြိူးမြားစှာ ရရှိစမှော ဖွဈပါတယျ။အကောငျးဆုံးထမငျးရညျကြိူနညျးကတော့ ဆနျစားပှဲတငျဇှနျး၃ဇှနျးစာကို ရေ၂ခှကျတှင ၂ဝမိနဈကွာအောငျပွုတျပါ။
ဆား သကွားဘာမှမထညျ့တာပိုကောငျးပါတယျ။ပွုတျရညျဟာ နို့ရောငျသနျးလာပွီဆိုတာနဲ့ အိုးကိုခပြွီး အအေးခံကာသောကျသုံးနျိုငျပါပွီ။ဒီနညျးဟာ အကောငျးဆုံးထမငျးရညျကို ရရှိစမေယျ့နညျးဖွဈပါတယျ။
ထမငျးရညျကနေ ဘယျလိုကနျြးမာရေးကောငျးကြိူးတှရေရှိနိုငျမလဲဆိုတာ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ထမငျးရညျရဲ့ကောငျးကြိူးမြားအနကျ တဈခုမှာ သငျ့စိတျရောကိုယျပါ လနျးဆနျးစခွေငျးဖွဈပါတယျ။သငျ့ရခြေိူးကနျထဲသို့ ထမငျးရညျအနညျးငယျထညျ့ပွီး ထိုရထေဲတှငျ မိနဈအနညျးငယျစိမျပါ။ထိုကုထုံးက သငျ့ကိုလနျးဆနျးစတောတှပေ့ါလိမျ့မယျ။
ဆနျဟာ ကစီဓာတျအပွညျ့အဝပါရှိသောအစာတဈခုပါ။ကစီဓာတျဆိုတာ သငျ့ကိုစှမျးအငျပေးစှမျးသော ပငျမအုတျမွဈပဲ ဖွဈပါတယျ။ထမငျးရညျကိုသောကျခွငျးဖွငျ့ စှမျးအငျပွညျ့ဝစှာ ရရှိစမှောပါ။
မနကျအိပျရာထခြိနျမှာ ထမငျးရညျတဈခှကျသောကျလိုကျခွငျးဖွငျ့ သငျ့တဈနတေ့ာအတှကျ အားဖွညျ့ပွီးသား ဖွဈစပေါလိမျ့မယျ။
နှရောသီမှာ ခြှေးထှကျမြားခွငျးကွောငျ့ ရဓောတျဆုံးရှုံးကွပါတယျ။ဒါကွောငျ့ သငျနပေူထဲမသှားခငျမှာ ထမငျးရညျတဈခှကျကိုသောကျသှားသငျ့ပါတယျ။ထမငျးရညျဟာ ရဓောတျသာမက
သငျ့တဈနတေ့ာလိုအပျသော အာဟာရဓာတျမြားကိုပါပေးစှမျးမှာ ဖွဈပါတယျ.
ထမငျးရညျဟာ ဝမျးလြှောဝမျးပကျြခွငျးကို သကျသာစသေော အိမျတှငျးကုထုံးတဈလကျဖွဈပါတယျ။လူကွီးမြားသာမက ကလေးငယျမြား ဝမျးပကျြတဲ့အခါမှာလဲ ထမငျးရညျကို တိုကျကြှေးနိုငျပါတယျ။
ထမငျးရညျကွောငျ့ ရဓောတျဆုံးရှုံးခွငျးကိုလဲ ပွနျလညျကောငျးမှနျစပေါတယျ။လလေ့ာခကျြတဈခုအရ ထမငျးရညျဟာ ကလေးသူငယျမြားဝမျးပကျြခွငျးအတှကျ အလှနျထိရောကျတဲ့သဘာဝဆေးတဈလကျလို့ဆိုပါတယျ။
ကြှနျမတို့ငယျငယျက ထမငျးရညျက အပူငွိမျးစတေယျလို့ လူကွီးမိဘတှပွေောတာကွားဖူးခဲ့ပါတယျ။ဒါဟာတကယျပါပဲ။ထမငျးရညျသောကျခွငျးဖွငျ့ သငျ့ကိုယျတှငျးအပူခြိနျကို ကဆြငျးစပေါတယျ။
နှရောသီ နပေူထဲသှားမယျ့သူမြား ထမငျးရညျကို မဖွဈမနသေောကျသုံးသငျ့ပါတယျ။
ထမငျးရညျသောကျခွငျးဟာ သငျ့အစာခွစေနဈကို ကောငျးမှနျစှာလညျပတျစပေါလိမျ့မယျ။
ထမငျးရညျမှာပါသော အာဟာရဓာတျမြားကွောငျ့ ဝမျးမှနျစပေါတယျ။အမြှုငျဓာတျကွှယျဝသော အစားအစာမြားနဲ့တှဲဖကျစားခွငျးဖွငျ့ ပိုမိုထိရောကျစမှောပါ။
ထမငျးရညျဟာ သငျ့ဆံသားအတှကျလဲ ကောငျးကြိူးမြားစှာ ပေးစှမျးနျိုငျပါသေးတယျ။ လှနျခဲ့သောနှဈပေါငျးမြားစှာကပငျ ရှမျပူနဲ့ ဆံပငျပြော့ဆေးမြားမှာ ဆံဆေးရညျကိုထညျ့သှငျးဖျောစပျကွပါတယျ။
chemical ပါသော ရှမျပူမြားအစား သဘာဝဆနျဆေးရညျက ကနျြးမာရေးအတှကျပိုမိုကောငျးမှနျပွီး အကုနျအကနြညျးပါးစတောပေါ့။ထမငျးရညျမှာ inositol ပါဝငျပွီး ဆံသားကိုပိုမိုအားကောငျးစပေါတယျ။
ထို့ပွငျ သငျ့ဦးရပွေားကို ဆနျဆေးရညျဖွငျ့ နှိပျနယျပေးပါက သငျ့ဆံပငျတှကေို အရငျးကနေ အဖြားထိ သနျမာစပေါတယျ။